Sida Loo Dhiso Hantida: 10 Siyaabood oo Fudud oo Lagu Dhisi Karo Hantidaada - Wareegga Hantida
Bogga ugu weyn Sida Loo Dhiso Maalka: 10 Siyaabood Oo Fudud Oo Lagu Dhisi Karo Hantidaada
Sawir laga helay richdoc.org
Barashada sida hodanka looga abuuro meel xoqan ayaa laga yaabaa inay u muuqato mid aan la gaari karin, gaar ahaan haddii aad had iyo jeer u malaynayso in shakhsiyaad hodan ah ay ku dhasheen ama ay ka macaasheen xiriirro waaweyn.
Si kastaba ha noqotee, marka loo eego falanqaynta 2019 ee Wealth-X, 67.7% dadka hodanka ah ee adduunka (oo lagu qeexay shaqsiyaad leh hanti dhan $ 30 milyan ama ka badan) ayaa iskood u sameeyay.
Xitaa xiisaha badan ayaa ah sida dhaqsaha leh ee ay u fuulaan dadka hodanka ah. Waxaa jiray warbixintii 265,490-ka 2019 oo ah dad aad u hantiile ah; daabacaadda 2020, tiradaasi waxay kor u kacday in ka badan 10% ilaa 290,720.
Xogta aan kor ku soo sheegnay waxay ina tuseysaa laba shay: midda kowaad, waxaa suurtogal ah in lacag laga abuuro wax aan jirin, tan labaadna, kuwa ku guuleysta “wax aan macquul ahayn” ayaa sidaas sameeya marar badan.
Halkii aad ka fikiri lahayd maalka aad jeclaan lahayd inaad hesho, waxaan kaa baryaynaa inaad sahamiso hababka kala duwan ee laga yaabo inaad barato inaad maal ka abuurto hadda.
Maqaalkan, waxaan ku samaynay liis ah 10 siyaabood oo fudud oo lagu dhisi karo hantidaada dhaqso. Dariiqooyinkan, waxaad bilaabi kartaa inaad ka dhisato hanti meel xoq ah isla markaana aad ku noolaato jiritaan dhaqaale oo xasilloon isla markiiba.
Baadhid: Shirkadaha Maareynta Xoolaha ee ugu sarreeya | 2021
Waa maxay Maalka?
Qof kastaa wuxuu leeyahay qeexitaan ka duwan hodantinimada. Dadka qaar, waxay u heleysaa hanti ma -guurto ah; kuwa kale, waxay ku lug leedahay samaynta maalgelin faa'iido leh.
Tirada hantida aad haysato marka lagaa jaro deymahaaga waa qeexidda maalka marka laga eego dareen dhaqaale.
Waxaa laga yaabaa inay u muuqato in xoolo aruurintu aysan macquul ahayn, laakiin dhab ahaantii waa wax iska fudud.
Run ahaantii, uma baahnid dakhli lix-tifaftiran si aad hadafkan u xaqiijiso. Xoolo waad heli kartaa si kasta oo aad u jirtid haddii aad u go'antahay.
Ka Hel Faham Dheeraad Ah: Waa Maxay Macnaha Maalku? | 10 Xaqiiqooyin ku saabsan Dhisidda Maalka
10 Siyaabood oo Fudud oo ku Saabsan Sida Loo Dhisi Karo Maalka
Waxaa jira siyaabo kala duwan oo wax ku ool ah oo aad ku dhisi karto hantidaada. Laakiin ujeeddooyin cad, waxaan daaha ka qaadi doonaa 10ka dariiqo ee ugu waxtarka badan ee fudud oo xalaal ah.
Liisaska hababkaan waxaan u sii amba qaadi doonaa koox ahaan iyadoo lagu saleynayo saddexda tallaabo ee ugu muhiimsan ee ay tahay inaad qaaddo dadaalka lagu dhisayo maalkaaga. Siyaabahaas waxaa ka mid ah:
Ballaadhinta farqiga u dhexeeya dakhligaaga iyo kharashyadaada
Fahmaan oo keydi farqigaas una oggolow inuu koro geometrically.
Barashada sida loo maalgashado
Hadda, aan xoogaa yara qaadno….
Tani waa halka kordhinta dakhligaaga si aad awood ugu yeelatid inaad keydiso wax badan oo aad ku ciyaarto. Haa, qaar badan ma rumaystaan ​​tan sababtoo ah odhaahda “Inta badan ee aad shaqaysato, inta badan albaabada kharashku way ballaadhaan”.
Waxay u egtahay waxoogaa yar laakiin haddii aad damacsan tahay inaad kobciso maalkaaga, waa inaad ka faa'iideysataa kordhinta dakhligaaga.
Si taas loo gaaro, waxaad awoodaa:
1. Hel Shaqo aad u mushahar badan
Xog -ururin xirfadeed oo buuxa ayaa laga heli karaa Xafiiska Tirakoobka Shaqaalaha Mareykanka. Waxaad markaa fiirin kartaa shaqooyinka lacagta badan leh iyo qeybahooda hoose oo aad codsan kartaa.
In ka badan boqol xirfadood waxay bixiyaan ugu yaraan $ 80,000 sanadkii celcelis ahaan. Dhakhaatiirta, maamulayaasha, kalkaaliyayaasha, iyo injineerada ayaa tusaale u ah xirfadleyda si fiican loo magdhabo.
Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah shaqooyinkan ayaa aad qaali u ah. Waxay qaadan kartaa waqti dheer in la dhammaystiro waxbarashada loo baahan yahay, waxayna qaadan kartaa xitaa waqti dheer in la bilaabo helidda mushahar aad u badan.
Kahor intaadan go'aansan xirfad, waa inaad ka fikirtaa dhammaan tixgelinnadan. Waddo kasta oo shaqo ee aad doorato, hubso in aysan kugu gelin dayn aad u badan.
Baadhid: 21 Lacag-bixiyaha Sare ee Xag-jirka ah ee 25-jirka ah oo leh Cadaadis Yar
2. Bilaw Ganacsi kuu gaar ah
In kasta oo noqoshada madaxaagu ay qaadato waqti dheer, haddana aad bay uga fiican tahay inaad noqoto shaqaale noloshaada oo dhan. Waxay ku xiran tahay qof ku siiya ka hor intaadan bixin kharashyadaada. Runtu waxay tahay, dadka dunida ugu taajirsan ma aha shaqaale, ee waa milkiileyaal ganacsi.
Ganacsigu wuxuu bixiyaa dakhli iyo soo -celin sare marka la helo hantida la helay, taas oo ah laba sifo oo hanti -abuurka ah. Sidaas darteed, haddii aad leedahay fikrad shirkad kaa caawin doonta inaad lacag badan hesho, bilow.
Ma aha inay noqoto shirkad weyn. Waxaad samayn kartaa ganacsi yar waxaadna bixin kartaa adeegyada aad xirfad u leedahay.
Markaad internetka soo gasho, tusaale ahaan, waxaad hadda bilaabi kartaa ganacsi gebi ahaanba internetka ah. Waxaad shaqaalaysiin kartaa shaqsiyaad kuu maamula meheraddaada haddii aad ku mashquulsan tahay waxyaabo kale.
3. Hel shaqo-dhinac
Uma baahnid inaad ku tiirsan tahay jeegaaga mushaharka haddii aad shaqo leedahay. Waxaad kor u qaadi kartaa dakhligaaga adigoo socodsiiya dhaqdhaqaaq dhinaca macaashka leh. Inta lagu jiro waqtiga firaaqada, waxaad u beddeli kartaa xirfaddaada ama xiisaha lacag.
Ilaa iyo inta aad haysato internet, waxaad ku ordi kartaa habab kala duwan oo faa'iido leh.
Kaaliye gacan -qabsi ah, qoraa madax -bannaan, iyo tifaftire, nuqul -qore, macallin online ah, tababare, la -taliye, naqshadeeye webka, soo -saare app, ama koodh -sameeye, waxaad haysataa fursado kala duwan.
Haddii aadan doonayn inaad ka shaqayso internetka, waxaad u shaqayn kartaa sidii macallin waqti-dhiman ah, macallin jimicsi oo waqti-dhiman ah, dukaanle ah, ama wadaagga raacidda raacidda ama adeegga gaarsiinta.
Akhriso: 15 Side Gigs oo kaa dhigi kara inaad ka taajirsan tahay shaqo waqti buuxa ah
4. Kor u qaad Xirfaddaada
Tani waa mid ka mid ah siyaabaha fudud ee aad u dhisi karto maalkaaga. Keliya helidda ama xoojinta xirfadahaaga, waxaad heli kartaa kordhinta mushaharka, dallacsiinta, ama xitaa fursado shaqo oo ka sii wanaagsan.
Haddaba, aan u gudubno qaybta labaad ....
Fahamka iyo kaydinta farqigaas oo u oggolow inay koraan joomatari ahaan.
Tani waa meesha keydintu u timaaddo in la ciyaaro. Si aad u bilowdo, keydintu waa mid ka mid ah tillaabooyinka ugu muhiimsan ee la qaado haddii aad rabto inaad koraan ama dhisato hanti. Macno malahan inta aad iska yar tahay ama aad yar tahay, joogteynta ayaa ah ciyaaryahanka weyn ee ciyaarta badbaadinta. Markaad inta badan wax keydsato, waxay isku biirisaa hanti weyn waqti ka dib.
10 Siyaabood oo Fudud oo Lagu Dhisi Karo Hantidaada
Markaan idhaahdo, kuwan soo socdaa waa siyaabaha fudud ee lagu kobcin karo hantidaada iyadoo la kaydsanayo:
1. Hayso Miisaaniyad
Miisaaniyaddu waa qorshe maaliyadeed oo isbarbar dhigaya kharashaadkaaga la filayo iyo dakhligaaga la filayo. Miisaaniyaddu waa aalad muhiim u ah uruurinta maalka. Waxay ku siinaysaa burburka kharashyadaada, oo tilmaamaya meelaha laga yaabo inaad lacag kaydsato.
Waxaa habboon in bil walba la dhiso miisaaniyad cusub si loo helo miisaaniyad la maamuli karo. Bal qiyaas badmareen aan lahayn jiheeye. Waa sida uu qof lacag ugu kharash gareeyo isaga oo aan qorsheyn kahor. Qofkaas oo kale ayaa hubaal ah inuu la kulmi doono burbur dhaqaale oo daran mustaqbalka.
Xeerka 50/30/20 waa mid ka mid ah hababka miisaaniyadda ee ugu caansan uguna waxtarka badan. Istaraatiijiyadani waxay soo jeedinaysaa in 50% dakhligaaga loo qoondeeyo waxyaabaha daruuriga ah sida cuntada, kirada, iyo daryeelka caafimaadka.
Waxyaabaha aan daruuriga ahayn, sida dukaamaysiga iyo madadaalada raaxada, waxay helaan 30% miisaaniyadda. 20% soo haray waa in loo qoondeeyo kaydinta sida qoondaynta ugu muhiimsan.
2. Ku Noolow Meeshaada Hoos
Kharashaadka xad -dhaafka ah waxay saamayn weyn ku yeelan kartaa kartidaada inaad ku urursato hanti.
Kharashkaaga ku yaree waxyaabo aan macno lahayn sida cunista dibadda, iibsashada dhar qurxoon, iyo qaadashada fasaxyo joogto ah.
In kasta oo wax -qabadku noqon karo mid daal badan oo niyad -jab leh mararka qaarkood, waxaad urursan doontaa xoolo waxaadna ka heli doontaa wax lagu farxo mustaqbalka fog.
3. Hayso Jeebka Maalmaha Roobka
Xaalado lama filaan ah, sida luminta shaqadaada, ayaa lagu diyaarin karaa baakadaha sanduuqa gurmadka.
Haddii aan la hayn keyd degdeg ah, masiibooyinka noocan ahi waxay kaa tuuri karaan istiraatiijiyaddaada hanti-dhiska. Iibinta maalgashiga ama qaadashada deynta waa laba natiijo oo caadi ah.
Markaad deyn qaadato, maalkaagu wuxuu bilaabmaa inuu yaraado. Waxa kale oo lagaa doonayaa inaad dulsaar ku bixiso deyntaada. Waxaad luminaysaa raasamaalkii iyo dulsaarkii aad kasban lahayd haddii aad iibin lahayd maalgashigaaga.
Si aad uga fogaato xaaladaha noocaas ah, u dhig lacag sanduuqa gurmadka si aad u daboosho kharashyada lama filaanka ah.
4. Dhis Lacag- Maskax
Tani waa mid ka mid ah siyaabaha fudud ee lagu dhiso maalka. Runtu waxay tahay, si kasta oo aad u kasbato iyo inta aad isku daydo inaad ku qarashgareyso, haddii aadan lahayn maskax ku habboon oo ku saabsan lacagta, waxaad la halgami doontaa inaad urursato ama dhisto maalkaaga.
Nolosha, ka hor intaanan si dhab ah wax uga qaban horumar kasta oo muhiim ah oo nolosheena ah, waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan beddelno waa fikirkeenna.
Robert Kiyosaki, oo ah ganacsade iyo qoraa Rich Dad, Poor Dad, wuxuu yiri, "Qof walba wuxuu awood u leeyahay inuu abuuro sanduuq maaliyadeed si uu u noolaado uguna horumaro mustaqbalka." "Si kastaba ha noqotee, waa inaad waqti ku bixisaa waxbarashadaada maaliyadeed si aad u dhisto dooni leh aasaas adag."
Maalgelinta waqtiga waxbarashadaada maaliyadeed ayaa ah tillaabada ugu horreysa ee lacag lagu abuurayo waxba. Baro macnaha weedhaha muhiimka ah sida dakhliga, kharashyada, qiimaha saafiga ah, iyo ku noqoshada maalgashiga, dakhliga dadban, iyo xorriyadda maaliyadeed.
Waxaad ka eegi kartaa waxyaabaha wanaagsan ee internetka ah, waxaad ka akhrisan kartaa buugaag maaliyadeed qorayaal sumcad leh si aad wax uga barato lacagta.
5. Ha haysanin Caymis Kaliya
Caymisku waa shay lagama maarmaan ah oo lagu daro miisaaniyaddaada. Caymiska naftaada iyo hantidaada asaasiga ah waxay kaa ilaalinayaan khasaare weyn haddii ay dhacdo musiibo.
Waa inaad heshaa caymis caafimaad ugu yaraan si aad isaga ilaaliso inaad musalafto markay dhacdo xanuun badan. Haddii aadan hore u lahayn, fiiri oo isbarbar dhig siyaasadaha caymiska caafimaadka ee UAE si aad u hesho midka kuugu fiican.
Tixgeli mulkiilaha guriga iyo caymiska baabuurka haddii aad leedahay guri iyo baabuur. Ka fikir inaad iibsato caymiska nolosha muddada haddii aad leedahay carruur ama qaraabo ku tiirsan.
Hantida in la dhiso waa wax weyn, laakiin in lumiyo xaalado aan la filayn iyo dhacdooyin ayaa noqon doona kuwo laga cabsado. Markaa noqo mid firfircoon oo hubi hantidaada ugu muhiimsan.
Ha, si kastaba ha ahaatee, caymis ka badan. Waxaa jira badeecado caymis oo tiro badan oo suuqa ku yaal oo gabi ahaanba aan waxtar lahayn. Haddii aadan qabin baahi khasab ah si aad u hesho dheeraad ah, ku dheji afarta kor ku qoran.
6. Maalgeli! Maalgeli !! oo Maalgeli !!!
Si aad u urursato maalka, waa inaad marka hore keydisaa ka dibna aad maalgashataa. Haddii aad raacday tillaabooyinka kore, hadda waxaad badbaadinaysaa ugu yaraan 20% dakhligaaga oo waxaad ka abuuri doontaa dakhli dheeraad ah xagga hustles -ka. Hadda waa waqtigii la isku dari lahaa labada oo si dhab ah loo maalgelin lahaa.
Dhammaan milyaneerarada aad taqaan oo aad u bogaadiso waxay urursadeen maalkooda iyagoo samaystay maalgashiyo suuqa saamiyada oo xikmad iyo faa'iido leh. Haddii aadan samayn lacag kugu filan si aad u dhammayso shaqada, ma lahaan kartid wax kale oo aan ahayn inaad qabato. Arrintu waxay tahay in awooddaada wax -soo -saarka ay kooban tahay, oo aadan lacag heli karin intaad seexanayso.
Maalgalinta lacagtaada suuqa, dhanka kale, waxay ka dhigan tahay in lacagtaadu adiga kuu shaqaynayso oo aad ka macaashto shaqooyinka dadka kale.
Haddaba, maxay yihiin xeeladaha ugu waxtarka badan ee lacagtaada loogu beddeli karo hanti fog?
Marka hore, gelinta lacagta koontada kaydka lama mid aha maalgelinta. Sanduuqa gurmadkaagu waa inuu noqdaa lacagta keliya ee aad halkaas kaga tagto. Taas ka sokow, lacagtaada waa in lagu maalgeliyaa meherado macaash badan leh oo soo celiya dakhli sare iyadoo la yareynayo halista.
Lacagta ku jirta akoonnada kaydka waxay heshaa dulsaar dhexdhexaad ah (badiyaa wax ka yar 1% APR) waxayna qiimayn kartaa haddii sicir -bararku ka sarreeyo dulsaarka kaydkaaga.
Midda labaad, waqtiga suuqa ma aha fikrad wanaagsan. Waxaa ka wanaagsan in la maalgashado maskax-fog halkii laga hagaajin lahaa waqti-gaaban suuqyada. Warka fiicani wuxuu yahay in suuqa uu kor u kaco inta uu hoos u dhaco (74% ilaa 26%), maalgashadayaasha muddada dheerna had iyo jeer way macaashtaan.
Hore u socoshada, waxaad maalgelin kartaa siyaabo badan sida:
Maalgalinta kalsoonida maalgashiga hantida maguurtada ah waxay kuu oggolaaneysaa inaad ka macaashto suuqa hantida maguurtada ah adigoon si toos ah ugu lug yeelan. REITs waa saamiyada lagu maalgeliyo shirkadaha guryaha ee wax iibsada oo iibiya guryaha. Qaybtan waxaa kale oo ku jira shirkado guryaha amaahda ah.
Marka qiimaha shirkadu kor u kacdo, adiguna waad ka faa'iidaysanaysaa. REITs waxay bixiyaan faaiidooyin aad u badan, oo aad dib u maalgelin kartid si aad u kordhisid faa'iidadaada.
7. Iibsiga Iibsiga
Maalgelinta saamiyada shirkadu waa mid ka mid ah siyaabaha ugu fudud uguna wax -ku -oolka badan ee lagu kobcin karo lacagta. Waxaad noqonaysaa saamiile marka aad iibsanayso saamiyo, waxaadna leedahay qayb ka mid ah shirkadda. Maalgelinta saamiyada iyada oo la adeegsanayo lacagaha sarrifka lagu kala iibsado ayaa ah hab aan khatar lahayn oo hufan oo sidaas lagu sameeyo.
ETF-yada ayaa ah lacag-ku-meelgaar ah oo la isku hagaajiyay. Waxay ka caawiyaan maalgashadayaasha inay ka fogaadaan ajuurada qaaliga ah iyo canshuuraha. Waxay sidoo kale kuu oggolaanayaan inaad kala duwanaato faylalkaaga saamiyada. Taas macnaheedu waa inaad bartilmaameedsan karto ETF -yada gaarka ah, sida suuqyada soo baxaya, suuqyada horumarsan, ama suuqyada Mareykanka, maalgashigaaga.
Kaydku wuxuu leeyahay soo -celinta ugu wanaagsan ee maalgashiga, in kasta oo uu aad uga khatar badan yahay hantida kale. Waxaa laga yaabaa inaad yareyso khatarahaaga oo aad kordhiso soo celintaada adoo adeegsanaya qorshe kala-duwanaansho oo si fiican loo wargeliyay.
8. Lahaanshaha Xisaab Hawlgab Wadareed (40k)
A 401 (k) waa nooc ka mid ah qorshaha hawlgabka tabarrucaadka qeexan ee shirkaduhu siiyaan shaqaalahooda.
Markaad iska diiwaangeliso mushahar dhimista soo noqnoqota, waxaad u qoondayn kartaa qayb ka mid ah dakhligaaga cashuurta kahor koontadan. Tabarrucaadkaaga waxaa laga yaabaa inuu u dhigmo loo -shaqeeyahaagu.
401 (k) dhaqameed macaashka maalgashigu wuxuu kobcayaa canshuur-dhaafka ilaa laga noqdo. Waa inaad ka faa'iidaysataa haddii shaqadaadu ku siiso.
In kasta oo tani aysan ahayn istiraatiijiyad deg -deg ah, marka lagu daro xeelado kale, waxaad la yaabi doontaa sida dhaqsaha ah ee lacagtaadu u kori karto.
Xoolo dhisiddu ma aha hawl adag. Waxaa laga yaabaa inaad dhaqso u kordhiso hantidaada haddii aad u go'antahay oo edbisay. Aad bay muhiim u tahay inaad ku hubaysato aqoonta maaliyadeed ka hor intaadan bilaabin wadadan.
Kaliya taasi waa inay kugu dhiirrigelisaa geedi socodka intiisa kale si sahal ah, taasoo kuu oggolaaneysa inaad hanti urursato.
Markay timaaddo abuurista hanti, dad badan ayaa iska indha tira xisaabaadka hawlgabka. Kaliya ma awoodi doontid inaad keydiso hawlgabnimada, laakiin sidoo kale waxaad awoodi doontaa inaad ballaariso hantidaada waqti ka dib.
Waa Maxay Macnaha Maalku? | 10 Xaqiiqooyin ku saabsan Dhisidda Maalka
20 aayadood oo Kitaabka Quduuska ah oo ku saabsan Maalka iyo Barwaaqada | 2021
Shirkadaha Maareynta Xoolaha ee ugu sarreeya | 2021
Sidee Ku Dhiso Maalka | 10 Hacks fudud oo lagu dhisayo Hantida
200+ Fikradaha Ganacsi ee Tooska ah oo 2021 kaa dhigi kara Hanti
10 Qalabka Maareynta Mashruuca Bilaashka ah ee Bilowga sanadka 2021
Iyada oo in ka badan 60 milyan oo qof ay adeegsadaan Craigslist bil kasta, waxaa jira khiyaanooyin kala duwan oo aad u…
40 Xigasho Awood Leh Oo Ku Saabsan Hadafyada Iyo Dejinta Hadafka | 2022
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee doorka muhiimka ah ka qaata guusha qofka waa dejinta yoolalka.…
Magaca ganacsiga, oo sidoo kale loo yaqaano DBA, waa magaca ganacsigu ku hoos gato arimo ganacsi.…
Sida loo tirtiro barnaamijyada iPad | Ku Samee Waqti Yar
Dadka qaarkiis, tirtirida apps-ka iPad-kooda waxa ay ula muuqan kartaa wax yar adag gaar ahaan haddii ay tahay in ay…